လက်တွဲခေါ်ယူ ဖေးမကူ (Phone Shan (London Vihara) | MoeMaKa Burmese News & Media
Ashin Dhamma Piya - ပညာရေးမူဝါဒကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးမည်ဆိုလျှင်
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ - အပိုင်း (၂၉)
မေငြိမ်း - Congratulations သားကြီး...
သားကြီးမောင်ဇေယျ - သမဂ္ဂ အိပ်မက်
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅-၁၉၈ဝ) - အပိုင်း (၅၇)
မုဒိတာရွှေကျောင်း တနှစ်ပြည့် အလှူပွဲတော် ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမှာ ကျင်းပ
ကျား ဦးခေါင်းပေါ်ကသူရဲကောင်းနှင့် လူပျင်းဥပဒေ
လက်တွဲခေါ်ယူ ဖေးမကူ (Phone Shan (London Vihara)
ဘုန်းသျှံ (လန်ဒန်ဝိဟာရ)၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂
၁၁.၁၁.၂၀၁၂- တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်က လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ ပြင်အား ၆-ဒသမ-၈၊ ရှိ သဘာဝကပ်ဆိုး ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ဧရာဝတီ မြစ်ဘေးရှိ မလားကျေးရွာကလေး ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံလိုက်ရပါတယ်။
ထိုရွာငယ်ကလေးဟာ ဧရာဝတီမြစ်မကြီး၏ အနောက်ဘက်ကမ်းမှာ အိမ်ခြေ (၁၆၀)ကျော်ရှိ၍ လူဦးရေ (၆၆၈) နေထိုင်လျှက် လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူ၊ စဥ့်အိုးစဥ့်ခွက် လုပ်ကိုင်သူ၊ အရောင်းအဝယ် လုပ်ကိုင်သူတို့နှင့် အတော်အတန် စည်ကားခေတ်မှီသော ရွာငယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ဘာသာတရားကိုလည်း လေးစားကြ၍ ခေတ်ပညာတတ် ပေါများသော ရွာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သာသနာဘက်မှာ ကြည့်မည်ဆိုလျှင်လည်း ရဟန်း သံဃာတော်များ၊ ရှင်သာမဏေများ၊ ဘုရားပွဲ၊ ကျောင်းပွဲ၊ ရှင်ပြုမင်္ဂလာ ပွဲများနှင့် အထူးတလည် စည်ကားသော ရွာကလေး ဖြစ်ပါတယ်။
သက်တော် (၆၁) သိက္ခာတော် (၄၁) ရှိသော အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ လန်ဒန်ဝိဟာရကျောင်းမှာ သာသနာပြု နေတော်မူသော၊ မုဒုံမြို့ မြို့မ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာကြီး၏ ပဓာန နာယက၊ ရန်ကုန်မြို့ မဟာစည် သာသနာ့ရိပ်သာ ဗဟိုဋ္ဌာနချုပ်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မဟာစည်သာသနာ့ ရိပ်သာများ၏ နာယကလည်းဖြစ်သော မုဒုံဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တ ကုသလာနန္ဒ မဟာထေရ်- မွေးဖွားရာဇာတိ ချက်မြှုတ် ရွာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော် ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ စာပေသင် ရှင်သမဏေ ပြုခဲ့သည်မှာလည်း ထိုရွာကလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေဘို-မန္တလေး မြို့ကြီးများမှာ လောကုတ္တရာ စာပေသင်၍ အသက်နှစ်ဆယ် ပြည့်သောအခါ မြင့်မြတ်သော ရဟန်းဘောင် တက်ခဲ့သည်မှာလည်း ထိုရွာငယ်ကလေးရှိ ရွာဦးကျောင်း ခန္ဓသိမ်တော် မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတော်၏ ကျောင်းသားငယ်ဘဝက ကျော်တက်ကျော်ဆင်း ထင်သလို ပြေးလွှားဆော့ကစား ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းအဝင်မုဒ်ဦးနှင့် ဆရာတော် ရဟန်းဖြစ်ခဲ့ရသော ရှေးဟောင်း သိမ်တော်မြတ်တို့ ယခုတော့ မြေခလို့ သွားခဲ့ပါပြီ။ ငယ်ရွယ်စဉ်က တူတူပုန်း ကစားခဲ့၊ ငရဲကြီးမှာမကြောက် မသိနားမလည်၊ နောက်ကွယ်မှာ ပုန်းခိုရာ ပြုခဲ့တဲ့ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်များ သီတင်းသုံးရာ သမိုင်းဝင် ဘုရားတိုက်မှာလဲ ထို့အတူ ပြိုကျလို့ ကျောင်းဆောင် အချို့မှာလည်း ကွဲအက် ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါပြီ။
ကျေးရွာမုလတန်းကျောင်းနှင့် ကျေးရွာတွင်းရှိ အုတ်နှင့်ပြုလုပ်ထားသော လူနေအိမ် တိုက်ခြောက်လုံး၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် (၁၁)လုံးကလည်း လုံးဝ မြေပြင်မှာ အိပ်စက် အနားယူသွားပါပြီ။ မြေသားမှာလည်း ကွဲအက်-ကြောင်းကြီးတွေနဲ့ ပျက်စီးသွားလို့ ရွာမှာအဆန်းတကျယ် ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ ဧရာဝတီ မြစ်ရေကလဲ မောက်တက်လာပြီး ရွာကို ကျော်လို့ လယ်ယာ စိုက်ခင်းများကို ရေလွှမ်း ဖျက်ဆီး၊ ရေတက်လာလျှင် ကာဆီးပြီးထားတဲ့ တာရိုးကြီးတွေကိုပါ ပျက်စီးအောင် လုပ်သွားခဲ့ပါပြီ။
အသက်ရွယ် (၈၀)ကျော် အဘိုးအဘွားများ ပြောပြချက်အရ ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း(၆၀) ကျော်လောက်မှာ ပုဂံငလျင်လှုပ်ချိန်က တစ်ကြိမ် ကြုံခဲ့ရဘူးတယ်၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက အသံတွေပေးပြီး တုန်ခါတယ်၊ ဒီထက်လည်း ပြင်းထန်တယ်၊ တိုက်တာ အဆောက်အဦးတွေ သိပ်မရှိသေးလို့ အပျက်အစီး ကြီးကြီးမားမား မရှိဘူး။ လူနေအိမ်တွေတော့ အားလုံးနီးပါး ပြားပြီး ပျက်စီးသွားတယ်။ အခုလည်း အိမ်တွေပျက်စီးမှု ပိုများတယ်၊ မြေလွှာ အက်ကြောင်းကြီးတွေလည်း ပိုကြီးတယ်၊ ဒါဟာ ဒုတိယဒုက္ခပဲလို့ ငြီးတွား ပြောဆို ကုန်ကြပါပြီ။
နိုဝင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့ နံနက် (၇)နာရီ (၄၅)မိနစ်အချိန် ငလျင်ကြီး လှုပ်ခတ်ပြီးသည့် နောက်ပိုင်းမှာ နေ့လည် (၂)နာရီခွဲတစ်ကြိမ်၊ ညနေ (၅)နာရီ မိနစ်(၂၀)မှာ တစ်ကြိမ် အင်အား ရစ်ခ်ျတာစကေး- ၅ ဒသမ ၈-ရှိတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်များ ထပ်မံလှုပ်ခတ် သွားခဲ့တာကြောင့် စိုးရမ်စိတ်ဖြင့် လူတွေအားလုံး ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ တဲထိုးနေကြရတဲ့ အဖြစ် ရောက်သွားပါပြီ။
အဆိုးဝါးဆုံးမှာတော့ တည်ဆောက်ဆဲ ဧရာဝတီ၏ အလှတရားတစ်ခု၊ ဒေသ၏တန်ဖိုး၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သမိုင်းဝင် ဖြစ်လာမည့် ကျေးရွာထိပ်က အောင်ဇေယျ မြစ်ကူးတံတားကြီး ပျက်စီးသွားခဲ့ပါပြီ။ အလှမ်းဝေးလှတဲ့ မန္တလေးမြို့၊ မိုးကုတ်မြို့တို့ကို လွယ်ကူ ချောမွေ့စွာ သွားလာနိုင်တော့မည်ဟု တစ်နယ်လုံးရှိ ပြည်သူလူထုများက မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြ၊ နှစ်များစွာက ဖြစ်လာလျှင် ကောင်းမှာလို့ တောင့်တခဲ့တဲ့ အောင်ဇေယျ။ ယခုတော့ အများပြည်သူ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပျက်သုန်းလို့ တစ်နယ်လုံး ငိုကျွေးရတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်ခဲ့ရပါပြီ။
ပြောပါရစေ… သဘာဝ ကပ်ဆိုးဟူသည် မခေါ်ပဲ လာတတ်သော်လည်း မနှင်ပဲတော့ ပြန်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွနုုပ်တို့၏ အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာ သစ်တောတွေ ပြုန်းတီး၊ သဘာဝ သယံဇာတတွေ ဖျက်ဆီးနေကြလို့ပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရှေ့မြောက်နှင့် အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာ ထူထပ်လှတဲ့ တောဆိုးသစ်ပင်တွေ ရှိပါတယ်၊ နိုင်ငံ၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်း၊ အရှေ့တောင်ဘက်နှင့် အနောက်တောင် အရပ်တွေမှာလည်း ထို့အတူပါပဲ၊ ကမ္ဘာက အသိအမှတ် ပြုရလောက်အောင်ကို သဘာဝ တောတောင်တွေ ပေါများလှပါတယ်။ ယခုတော့ တရားမဝင်ရော- တရားဝင်ရော ထင်သလို ခုတ်လှဲကြ၊ အစားထိုး စိုက်ပျိုးဖို့ကိုလည်း မရည်ရွယ်၊ လည်သူတွေသာစားလို့ မြေယာပါမကျန် လှန်လိုလှန် မှောက်လိုမှောက် လုပ်လာခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်ကျော်လာခဲ့ပြီ မဟုတ်လား၊
တောတောင်တွေ ပျက်သုန်းကုန်ပါပြီ၊ ဧရာဝတီ- ချင်းတွင်း မြစ်ရေတွေလည်း နောက်ခဲ့ကြပါပြီ။ ဧရာဝတီ- ချင်းတွင်းကို အမှီပြုလို့ အသက်မွေးခဲ့သူတွေလည်း လူမသိ သူမသိ မျက်ရည်သုတ်လို့ ငိုကျွေးခဲ့ရတဲ့ ရက်တွေ များခဲ့ကြပါပြီ။ အရင်းစစ်တော့ အမြစ်က ဆိုတဲ့အတိုင်း အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားတစ်ရပ်၏ အမျှော်အမြင်နည်းမှု၊ ဉာဏ်မဲ့မှု၊ ညှာတာ ထောက်ထား ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ကင်းမဲ့မှု၊ အတ္တကြီး ကိုယ်ကျိုး ရှာမှု တွေကြောင့်ပဲလို့ ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်။
သဘာဝကပ်ဆိုးတွေ ဒို့မြေမှာ နောင်မလာရအောင် မကျရောက်အောင် လုပ်ဖို့က ပြည်သူတွေ အသိပညာရှိဖို့ လိုပါပြီ၊ ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေကို ချစ်တတ်ဖို့ လိုပါပြီ၊ ဒါဒို့ပြေ ဒါဒို့မြေ ဒို့ပိုင်တဲ့မြေလို့ ပါးစပ်က ဆိုနေရုံမျှ ပြီးသွားမည့် အချိန်အခါ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သစ်တစ်ပင်ခုတ် သုံးပင်ပြန်စိုက်ရမည် ဆိုတာကိုလည်း စိတ်ထဲမှာ စွဲထားဖို့ လိုသလို လက်တွေ့ ကျင့်သုံးကြဖို့ လိုပါပြီ။ အုပ်ချုပ်သူမှစ- အုပ်ချုပ်ခံ လူတန်းစားနှင့် နိုင်ငံ ဝန်ထမ်းများပါမကျန် ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာအတွက် ကိုယ့်တာသူ့တာ မခွဲထားပဲ တစ်စိတ်တည်း တစ်ဝမ်းတည်း လက်တွဲလို့ ဆောင်ရွက်ကြပါမှ ဖြစ်တော့မှာပါ။
ကမ္ဘာမှာ သဘာဝ တရားဆိုးတွေက နိုင်ငံပေါင်းစုံကို မြင်သာအောင် သိအောင် ပြောလာကြ ပြလာကြပါပြီ။ ကမ္ဘာကြီး ပျက်စီးဖောက်ပြန်အောင် လုပ်နေတာလည်း ကမ္ဘာပေါ်နေကြတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၊ ကောင်းအောင် စောင့်ရှောက် ရမည်မှာလည်း ကျွန်ုပ်တို့ပါပဲ ဆိုတာ ဘာသာတရား အဆုံးအမနဲ့ ပြောရလျှင် အားလုံးအတွက် ”အပ္ပမာဒေန သမ္မာဒေထ” လို့ ဆိုလိုက်ပါရစေတော့။
သတ္တဝါ မှန်သရွေ့ တရားတွေ့ ချမ်းမြေ့သာယာ ရှိကြပါစေ…
၁၂. ၁၁. ၂၀၁၂။
မုဒုံဆရာတော်၏ ဇာတိ မလားကျေးရွာနှင့် ဘုရားကျောင်းကန်များ ပြုပြင်တည်ဆောက် နိုင်ရန်- အလှူငွေခေါ်ခေါ်၊ ကူညီငွေ ပြောပြော မိမိသဘော ဆန္ဒအတိုင်း လှူလိုက ကူညီလိုက အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်သွယ်ရန်။ သို့မဟုတ်- ဆရာတော်၏ ဘဏ်အကောင့်တွင် ထည့်သွင်းပေး ကြပါရန်။
မုဒုံဆရာတော်= ဖုန်း = 075 3333 6448/ 0044 – 75 3333 6448/
လက်ကမ်း မျှဝေပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ပါသည်။ မလားကျေးရွာ၏ ပျက်စီးမှု အခြေအနေများ…. မလားကျေးရွာမှ သီးခြားဓာတ်ပုံများ မရောက်သေးပါ၊